Marvel Universe – Channel Myanmar
Guardians of the Galaxy (2014) MCU Light years from Earth, 26 years after being abducted, Peter Quill finds himself the prime target ofamanhunt after discovering an orb wanted by Ronan the Accuser. 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ျဖင့္ Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုေပါင္းတင္ဆက္ပါသည္။MCU ဇာတ္ကားအားလံုးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မွာ Download ႏိုင္ပါသည္။++++++++++++++++++++++++++++Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ္လုပ္ေရးမွ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ နွစ္က စျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ Iron Man-1 နဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအပိတ္ကေတာ့ ...
Ant-Man (2015) MCU Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan လို့ခေါ်ကြတဲ့ Thanos က ဒီကျောက်တုံးတွေကို စုစည်းပြီး စကြဝဠာကို သူ့သဘောအတိုင်းဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Avengers( Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, ...
The Incredible Hulk (2008) MCU Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan လို့ခေါ်ကြတဲ့ Thanos က ဒီကျောက်တုံးတွေကို စုစည်းပြီး စကြဝဠာကို သူ့သဘောအတိုင်းဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Avengers( Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, ...
The Incredible Hulk (2008) MCU
Thor: Ragnarok (2017) MCU 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ျဖင့္ Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုေပါင္းတင္ဆက္ပါသည္။MCU ဇာတ္ကားအားလံုးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မွာ Download ႏိုင္ပါသည္။++++++++++++++++++++++++++++Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ္လုပ္ေရးမွ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ နွစ္က စျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ Iron Man-1 နဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအပိတ္ကေတာ့ Endgame (2019) ျဖစ္ပါတယ္။Marvel Universe မွာ Infinity Stone လို႕ ေခၚတဲ့ စြမ္းအား အၾကီးဆံုး ေက်ာက္တံုး(၆) လံုးရိွပါတယ္။ အဲဒီေက်ာက္တံုးေတြဟာ စၾကဝဠာအႏွ႕ံမွာ ျပန္႕က်ဲေနတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးခ်င္းစီမွာ သီးျခားအစြမ္းေတြ ရိွျပီး သာမာန္လူေတြ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲဖို႕ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပါပဲ။ Infinity War ရဲ႕ အဓိက ဗီလိန္ျဖစ္တဲ့ Mad titan ...
Thor: Ragnarok (2017) MCU
Avengers: Endgame (2019) MCU Avengers: Endgame(2019)IMDb...8.8,,,,,,Rotten.....95%ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ သိပ္ေျပာစရာမလိုလွပါဘူး။အားလံုးလည္း သိေနၾကမွာပါ။ Mad Titan ျဖစ္တဲ့ Thanos ဟာ စၾကဝဠာႀကီး အဓြန္႕ရွည္ဖို႕အနႏၱေက်ာက္တံုးေတြကိုသံုးၿပီး သက္ရွိ တစ္ဝက္တိတိ ေဖ်ာက္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီအျဖစ္ကို အဗန္ဂ်ာေတြ ဘယ္လို ျပန္ကယ္တင္မလဲ ဘယ္လို လက္စားေခ်မလဲဆိုတာ ဒီကားမွာ ေတြ႕ရပါေတာ့မယ္။အားလံုးအၾကိဳက္ေတြ႕ၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။အက္မင္ေတြေတာ့ ရံုမွာ ၃ ေခါက္ေလာက္ၾကည့္ၿပီး ဒီဗားရွင္းကိုငါးေခါက္ေလာက္ကို ျပန္ၾကည့္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ၾကိဳက္ပါတယ္။ ခံစားၾကည့္ၾကပါ။ဇာတ္လမ္းအညႊန္းနဲ႕ ဘာသာျပန္သူကေတာ့ Little Neo ပဲျဖစ္ပါတယ္...... MCU ဇာတ္ကားအားလံုးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မွာ Download ႏိုင္ပါသည္။++++++++++++++++++++++++++++Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ္လုပ္ေရးမွ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ နွစ္က စျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ Iron Man-1 နဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအပိတ္ကေတာ့ Endgame (2019) ျဖစ္ပါတယ္။Marvel Universe မွာ Infinity ...
Thor: The Dark World (2013) MCU Thor fights to restore order across the cosmos… but an ancient race led by the vengeful Malekith returns to plunge the universe back into darkness. Faced with an enemy that even Odin and Asgard cannot withstand, Thor must embark on his most perilous and personal journey yet, one that will reunite him with Jane Foster and force him to sacrifice ...
Thor (2011) MCU Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan လို့ခေါ်ကြတဲ့ Thanos က ဒီကျောက်တုံးတွေကို စုစည်းပြီး စကြဝဠာကို သူ့သဘောအတိုင်းဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Avengers( Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, ...
Captain America: Civil War (2016) MCU Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan လို့ခေါ်ကြတဲ့ Thanos က ဒီကျောက်တုံးတွေကို စုစည်းပြီး စကြဝဠာကို သူ့သဘောအတိုင်းဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Avengers( Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, ...
Captain America: Civil War (2016) MCU
Captain America: The Winter Soldier (2014) MCU After the cataclysmic events in New York with The Avengers, Steve Rogers, aka Captain America is living quietly in Washington, D.C. and trying to adjust to the modern world. But whenaS.H.I.E.L.D. colleague comes under attack, Steve becomes embroiled inaweb of intrigue that threatens to put the world at risk. Joining forces with the Black Widow, Captain ...
Captain America: The Winter Soldier (2014) MCU
Captain America: The First Avenger (2011) MCU Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan လို့ခေါ်ကြတဲ့ Thanos က ဒီကျောက်တုံးတွေကို စုစည်းပြီး စကြဝဠာကို သူ့သဘောအတိုင်းဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Avengers( Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, ...
Captain America: The First Avenger (2011) MCU
Doctor Strange (2016) MCU Doctor Strange - Marvel ရဲ႕ သိပၸံေလာကထဲက မဟုတ္တဲ့ စူပါဟီးရိုးတစ္ေယာက္။ Marvel ရဲ႕ အစြမ္းထက္ဆံုး ေမွာ္ဆရာေတြထဲက တစ္ေယာက္။ အကုန္လံုးသိေနၾကျပီမို႕ သိပ္ေတာ့ ညႊန္းစရာမရိွေတာ့ပါဘူး။ စူပါဟီးရိုးရုပ္ရွင္ေတြထဲက ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ အေကာင္းစား သေဘာတရားအေကာင္းစားေတြနဲ႕ ဇာတ္ကားတစ္ကား။ ဘန္နီဒစ္ရဲ႕ လံုး၀လိုက္ဖက္တဲ့ ဇာတ္ရုပ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းမွာေတာ့ အာရံုေၾကာခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ စတီဖင္စထရိန္႕ - သိပ္ဘ၀င္ျမင့္ အတၱၾကီးတဲ့ ပါရမီရွင္ဟာ တစ္ရက္မွာ အက္ဆီးဒန္႕ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးျဖစ္ခဲ့ျပီး ျပန္ေကာင္းမလာနိုင္ေတာ့မယ့္ လက္ဒဏ္ရာၾကံဳလာခဲ့ပါတယ္။ သိပၸံနယ္ပယ္ရဲ႕ ကုထံုးအားလံုးနဲ႕ ကုလုိ႕မရေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျဖစ္ ေဆးကုသခံဖို႕သြားခဲ့ရာကေန ကမာၻၾကီးထဲမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတဲ့ ေမွာ္ေလာကထဲကို ေရာက္သြားတဲ့ အခါ....Doctor Strange - Marvel ရဲ့ သိပ္ပံလောကထဲက မဟုတ်တဲ့ စူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်။ Marvel ရဲ့ အစွမ်းထက်ဆုံး မှော်ဆရာတွေထဲက တစ်ယောက်။ အကုန်လုံးသိနေကြပြီမို့ သိပ်တော့ ညွှန်းစရာမရှိတော့ပါဘူး။ စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွေထဲက ဒိုင်ယာလော့ခ် အကောင်းစား သဘောတရားအကောင်းစားတွေနဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား။ ...
Doctor Strange (2016) MCU
Iron Man3(2013) MCU When Tony Stark's world is torn apart byaformidable terrorist called the Mandarin, he starts an odyssey of rebuilding and retribution. 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ျဖင့္ Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုေပါင္းတင္ဆက္ပါသည္။MCU ဇာတ္ကားအားလံုးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မွာ Download ႏိုင္ပါသည္။++++++++++++++++++++++++++++Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ္လုပ္ေရးမွ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ နွစ္က စျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ Iron Man-1 နဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအပိတ္ကေတာ့ Endgame (2019) ျဖစ္ပါတယ္။Marvel Universe မွာ Infinity ...
Avengers: Age of Ultron (2015) MCU Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan လို့ခေါ်ကြတဲ့ Thanos က ဒီကျောက်တုံးတွေကို စုစည်းပြီး စကြဝဠာကို သူ့သဘောအတိုင်းဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Avengers( Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, ...
Iron Man2(2010) MCU Marvel Cinematic Universe Intro=======================Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan လို့ခေါ်ကြတဲ့ Thanos က ဒီကျောက်တုံးတွေကို စုစည်းပြီး စကြဝဠာကို သူ့သဘောအတိုင်းဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Avengers( Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, ...